မန္တလေးက ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခ အကြောင်းတစ်စေ့တစောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » မန္တလေးက ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခ အကြောင်းတစ်စေ့တစောင်း
မန္တလေးက ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခ အကြောင်းတစ်စေ့တစောင်း
Posted by YE YINT THU on Feb 28, 2012 in Complaint / Claim, Myanma News |7comments
ရပ်ကွက် (သို့ မဟုတ်) ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ကြောင်း ၂၅ ရက်နေ့ ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများမှာ အခုလို ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အဆိုပါဥပဒေ၏ အခန်း (၁၅) အပိုဒ် ၃၃။ တွင်
“ ရပ်ကွက် သို့ မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေမှူးသည် ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခြင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ငွေကြေး တစ်စုံတစ်ရာကောက်ခံခြင်းမပြုရ။ ”
လို့ ဆိုထားပါတယ်။ သို့ သော်လည်း မန္တလေး ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ် ကျွဲဆည်ကန်ကားကြီးကွင်းတည်ရှိရာ ချမ်းမြသာယာရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးမှာတော့ ယနေ့ အထိ ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခ တောင်းကောင်း နေတုန်းပါဘဲ။ ဧည့်စာရင်းတိုင်သူ များထံမှ လူတစ်ဦး (၇) ရက် တစ်ပါတ်စာတိုင်လျှင် ၁၀၀ ကျပ် / အကြောင်းမသိသူများဆိုလျှင် ၂၀၀ ကျပ်စသဖြင့်ဧည့်စာရင်း တိုင်ကြားခ ကောက်ခံလျှက်ရှိ တုန်းပါဘဲ။
တကယ်ဆို ဒီဥပဒေကို လွှတ်တော်က အတည်ပြုပြီး သမ္မတ ကိုယ်တိုင်ကတောင် လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ထားပေမယ့် အောက်ခြေမှာတော့ အခုလို ထင်ရာစိုင်းကောင်းနေတုန်းပါဘဲ။
အဆိုပါဥပဒေ၏ အခန်း (၅) အပိုဒ် ၁၁။
လိုက်နာစောင့်ထိန်းရမည့် ကျင့်ဝတ်များ အခန်းမှာဆိုရင်
“ ရပ်ကွက် သို့ မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေမှူးသည် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင်အောက်ပါကျင့်ဝတ်များနှင့် အညီကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဥပဒေ။ နည်းဥပဒေများ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ အမိန့် ညွန်ကြား ချက်များနှင့် အညီဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ခ) လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်း။ အရှိန်အ၀ါကို အသုံးပြုခြင်း။ မသမာမှုပြုခြင်းနှင့် မလျော်သြဇာ သုံးခြင်း တို့ မှရှောင်ကြဉ်ခြင်း။
(ဂ) ဥပဒေနှင့်အညီပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခြင်း။
ဘယ်အချိန်ကျမှ လူကြီးတွေသိပြီး ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုကိုင်တွယ်ပေးမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကလည်းနီးလာပြီမို့ဒီတစ်ခါမဲထည့်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူရဲ့ အခက်အခဲကို ဂရုစိုက်မယ့်သူ ပြည်သူကို အမှန်တကယ်အလုပ်အကျွေးပြုမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ရွေးချယ်တတ်ဖို့ လည်းအရေးကြီး ပါကြောင်းသတင်းမျှဝေနှိုဆော်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံ တောတိုက်ရပ်ကွက်မှာ လဲ ပေးနေရသေးတာပဲ။
ဈေးတောင် ပိုကြီးသေး သိ သိ မသိသိ တပတ်စာ တယောက် ၂၀၀ တဲ့။ ဧည့် သည် ၂ ယောက် ဆို ရင် စာရွက်စာတမ်းကြေး ၁၀၀ ပါ ပေါင်း ပြီး ၅၀၀ ယူနေတာပဲ။
ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးမှာ TV ပျက်နေလို့ သတင်းမကြည့်ရသေးဘုး
သတင်းစာ သမား မရောက်တာလဲ ကြာပြီ
ဟူး ……….. ပြောပြောနေရတာလဲ အာညောင်းတယ် … ဘာတွေ လာလာ ပြောနေတာလဲမသိ (လူကြီး စိတ်ညစ်အောင်) …. အခန်း (၁၅) အပိုဒ် ၃၃ တဲ့။ ရုံးမှာက ဥက္ကဌ အခန်း တစ်ခန်းပဲရှိတယ် … ပိုက်ဆံက တော့ ရရ “သုံးသုံး” ပါပဲ ………..
ဒီရပ်ကွပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးဆိုတာ တကယ်တမ်း လိုကိုမလိုတာဗျ။
ပဒေသရာဇ်ခေတ် အုပ်ချုပ်ရေး ကို အခြေခံပြီး အင်္ဂလိပ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်စနစ်ဖိနှိပ်ရေး အုပ်ချုပ်မှုပုံစံကနေ ထွက်မလာနိုင်သေးတော့ ရှိစေတော့။ ဒီ ရပ်ကျေး ဥပဒေထဲက အချက်ပေါင်း ၃၆ချက်လောက်ရှိတာတွေက သူ့အစိုးရဌာနတွေက သူ့ဘာသာ သူ တာဝန်ယူပြီးလုပ်ရမှာတွေ။ အဲဒီအတွက် လူထုကို ဝန်ပိအောင် ဖိလို့ချုပ်လို့ကောင်းအောင် ရပ်ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှုးဆိုပြီး ဝန်ထုပ်တင်ပေးထားတာ။ ဒီမိုကလေစီပေါ့- ဥပဒေနဲ့ အညီပဲနော်- ဆော်မယ်သာမှတ်။
အော် မင်းတို့ ဒီမိုကလေစီ ဆိုတာဒါလားကွလို့မေးလိုက်ချင်ပါဘိ။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ ဧည့်စာရင်းလဲမတိုင် ခဲ့ရပါဘူး။ ငါတို့မြန်မာမှာမပဲ ဒီမှာမွေး ဒီမြေမှာ ကြီးပြီး မင်းတို့ဆီမှာ ဧည့်စားရင်တိုင်ကြရအုန်းမှာလား။
ညအချိန်မတော် သူများအိမ်ကို တံခါးလာခေါက်တာဘယ်သူကြိုက်မလဲ။
အောက်ခြေက ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ။ ရာအိမ်မှုး အထိ ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ အာဏာပြလို့ ရအောင် လုပ်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုလို့ ပဲမြင်မိပါတယ်။
အင်းဗျာ စိတ်မကောင်းစရာပါဘဲ။ဒါနဲ့ ခုထွက်လာ တဲ့ ဥပဒေသစ်မှာ မဲစနစ်နဲ့ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရ
မယ်ဆိုပါလား။လစာလဲ ပေးအုံးမှာတဲ့ဗျို့ ။ကျေးရွာ၊ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေတော့ မသိဘူးဗျာ၊
မြို့ နယ်ရယ် ခရိုင်အဆင့်က ဘာအရည်အချင်းမှမရှိ၊အရက်သောက်၊ဂေါက်ရိုက်လောက်ဘဲတတ်တဲ့
ဧည့်စာရင်းကိစ္စကလဲဗျာ တခါမှကိုမအေးတော့တာ။နယ်ဖက်မှာတော့ အဲလောက်မဆိုးသေးဘူး။
ပိုက်ဆံက အလိုက်သိသိ မသိသိ ပေးရတာနော်….
အတင်းကို တောင်းတော့တာပဲ ဗျို့….